Aragon စျေး - အွန်လိုင်း ANT ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Aragon (ANT)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Aragon (ANT) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Aragon ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $43 439 125.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Aragon တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Aragon များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
AragonANT သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$3.55AragonANT သို့ ယူရိုEUR€3.02AragonANT သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£2.71AragonANT သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.3.25AragonANT သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr31.97AragonANT သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.22.51AragonANT သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč79.17AragonANT သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł13.3AragonANT သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$4.73AragonANT သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$4.95AragonANT သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$79.6AragonANT သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$27.53AragonANT သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$19.47AragonANT သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹265.91AragonANT သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.599.89AragonANT သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$4.88AragonANT သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$5.37AragonANT သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿110.5AragonANT သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥24.69AragonANT သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥376.68AragonANT သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩4205.72AragonANT သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦1376.17AragonANT သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽261.22AragonANT သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴98.21
AragonANT သို့ BitcoinBTC0.0003 AragonANT သို့ EthereumETH0.00901 AragonANT သို့ LitecoinLTC0.0607 AragonANT သို့ DigitalCashDASH0.0372 AragonANT သို့ MoneroXMR0.0379 AragonANT သို့ NxtNXT265.54 AragonANT သို့ Ethereum ClassicETC0.504 AragonANT သို့ DogecoinDOGE1006.36 AragonANT သို့ ZCashZEC0.0406 AragonANT သို့ BitsharesBTS131.05 AragonANT သို့ DigiByteDGB114.92 AragonANT သို့ RippleXRP11.73 AragonANT သို့ BitcoinDarkBTCD0.119 AragonANT သို့ PeerCoinPPC11.41 AragonANT သို့ CraigsCoinCRAIG1579.33 AragonANT သို့ BitstakeXBS147.82 AragonANT သို့ PayCoinXPY60.5 AragonANT သို့ ProsperCoinPRC434.88 AragonANT သို့ YbCoinYBC0.00186 AragonANT သို့ DarkKushDANK1111.37 AragonANT သို့ GiveCoinGIVE7502.63 AragonANT သို့ KoboCoinKOBO789.66 AragonANT သို့ DarkTokenDT3.27 AragonANT သို့ CETUS CoinCETI10002.24
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Tue, 11 Aug 2020 04:00:03 +0000.